စာမရေးဖြစ်တာလည်းကြာပြီ ကြာတာမှ တော်တော့်ကိုကြာပြီ ။ ဒါပေမယ့် အမြဲချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့စာမျက်နှာမှာ အချိန်နဲ့အမျှ သူငယ်ချင်းများကို သတိရလျှက်ရှိပါတယ် ။
ဒီနေ့ ပေါ့ပါးအေးချမ်းမှုနဲ့အတူ ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်မွေးဖွားလာတဲ့နေ့တစ်ရက်မို့ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာနဲ့ ကြည်နူးလျှက်ရှိပါတယ် ။
ထွေထွေထူးထူး နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဘာမှ ဖြစ်မလာသေးပေမယ့် ကိုယ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အနေအထားနဲ့ ကိုယ်ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့ခရီးလမ်းတလျှောက်မှာ ကျေနပ်အေးချမ်းလျှက်ရှိပါတယ် ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆုတောင်းပေးနေကြအတိုင်း ချစ်ခင်သူများ စာဖတ်သူများ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ ဗျာ ။
Redirect to blogspot domain
Dear All friends and readers ,
I would like to remove my .com domain and now redirect to www.thettantcho.blogspot.com . I can't update the dot com purchase yearly and now want to stay at blogspot till the end .
Posted by သက်တန့်ချို at 10:25 AM 1 comment: